radio himilo | Radio Himilo | Page 4
Home / Author Archives: radio himilo (page 4)
radio himilo January 15, 2018	Xulka cayaaraha Leave a comment 60 Views
Muqdisho – Manchester United ayaa qarka u saaran inay lasoo wareegto Alexis Sanchez ka dib markii Manchester City ay ka gaabisay soo xero-gelinta saxiixa weeraryahanka Arsenal. Chilean-kan ayaa ahaa mid xiiso ka helaya Old Trafford tan iyo maalmihii Sir Alex ...
Baxnaano lix bilood qaadatay oo badbaadisay!
radio himilo January 15, 2018	Features Leave a comment 73 Views
Muqdisho – Isbitaalka ayaa laga soo saaray Ilmo dhashay oo la rumeysan yahay inuu yahay kii ugu miisaanka yaraa dunida oo dhimasho uga badbaaday si mucjiso leh. Ilmahaan yar lix bilood ayuu ku jiray isbitaaka, waxayna dhaqaatiirtu ku qiyaaseen ka ...
Sameey sidaan si aad dhakhso u seexato
radio himilo January 15, 2018	Features Leave a comment 68 Views
Muqdisho – Badanaa maskaxda waxa si lama filaan ah ugu soo dhaca xilliga u diyaar garawga hurdada hawlihii ugu weynaa. Waxay ka fekertaa waxyaabihii aan u qabsoomin iyo kuwa horyaala maalinta xigta. Si loola dagaallamo dhibaatadan, daraasad cusub ayaa soo ...
Rea Madrid oo Ronaldo u adeeg-saneysa soo xera-galinta Neymar
radio himilo January 14, 2018	Xulka cayaaraha Leave a comment 68 Views
Muqdisho – Real Madrid ayaa laga yaabaa inay isticmaasho Cristiano Ronaldo iyagoo qeyb kaga dhigeya heshiiskii ay ku doonayaan xiddiga PSG ee Neymar, sida ay ku warameyso El Closet radio ee Cadena SER. Florentino Perez ayaa doonaya inuu xiddiga reer ...
Kooxaha Arsenal iyo Chelsea oo isku heysta Xiddig Muhiim ah
radio himilo January 14, 2018	Xulka cayaaraha Leave a comment 38 Views
Muqdisho – Kooxaha Arsenal iyo Chelsea ayaa xiriir la sameeyay wakiilka laacibka la yiraahdo Richarlison ka hor inta uusan heshiis u saxiixin kooxdiisa Watford. Richarlison ayaa u dhaliyey shan gool oo Premier League ah Watford tan iyo markii uu u ...
Jasiiradda ugu yar dunida ee lagu noolyahay
radio himilo January 14, 2018	Features Leave a comment 97 Views
Muqdisho – Sida lagu daabacay wargeyska Telegraph, Inta badan dadka booqashada ku yimaada New York waxay yaqaanaan Jasiiradda Manhattan, balse marnaba ma aysan maqlin jasiiradda yar ee ku taala waqooyiga Ameerika oo baaxad ahaan dhan garoon tennis. Wargeysku waxa uu sheegay ...
Manchester United oo £444m ku dooneysa laacibka Paris Saint-Germain ee Neymar.
radio himilo January 13, 2018	Xulka cayaaraha Leave a comment 48 Views
Muqdisho – Manchester United ayaa lagu soo warramayaa in ay go’aansatay isku diyaarinta sidii ay kusoo xera galin laheyd laacibka kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar oo ay ku dooneyso £444 milyan oo lacagta Ingiriiska ah. Intii lagu guda jiray xagaagii ...
Arda Turan oo dib ugu laabtay dalka Turkiga kuna biiray kooxda Istanbul Basaksehir FK.
radio himilo January 13, 2018	Xulka cayaaraha Leave a comment 36 Views
Muqdisho – Ciyaar-yahanka qadka dhexe ee dalkaTurkiga Arda Turan ayaa ka baxay albaabka Camp Nou isaga oo dib ugu laabtay waddankiisa hooyo, heshiis amaah ah oo ku eg illa 2020-ka. Barcelona ayaa xaqiijisay in Arda Turan uu ugu biirayo Istanbul ...
Hooyo loo xukumay iibka cunugeeda oo Saddex maalin jir ah
radio himilo January 10, 2018	Features, Uncategorized Leave a comment 70 Views
Hooyo 25-Jir ah ayaa lagu xakumay labo Sano oo xarig ah kaddib markii lagu helay danbi ah iibka Cunugeeda oo Sadax maalin dhalan. Waxay dhaafsiisatay 10,000 KSH, Goobjoog ayayna ka aheyd maxkamadda Deegaanka Kitui oo xakunkani ka dhacay, Markii Garsoore ...
Marouane Fellaini oo ku war galiyey Manchester United bixi-taankiisa.
radio himilo January 9, 2018	Xulka cayaaraha Leave a comment 37 Views
Muqdisho – Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Marouane Fellaini ayaa lagu soo warramayaa inuu u sheegay kooxdiisa inuusan saxiixi doonin qandaraas cusub. Heshiiska haatan ee Fellaini ayaa dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedkan, United-ka ayaana dooneysa inay sii dheereyso qandaraaska laacibkan ...